Wasiir Goodax Barre oo ka laabtay warkiisii been-abuurka ahaa ee imtaxaanadka Puntland (akhri) – Radio Daljir
Wasiir Goodax Barre oo ka laabtay warkiisii been-abuurka ahaa ee imtaxaanadka Puntland (akhri)
Maajo 19, 2019 5:25 g 0
Xilli shalay uu sheegay Wasiirka Waxbarashadda DFS Cabdulaahi Goodax barre in uu fashilmay imtaaxanadka shahaadiga ah ayaa wuxuu maanta sheegay mar kale in xog khaldan la siiyey.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Goodax Barre oo goordhow soo saaray War Saxaafadeed ayaa sheegay inuu ka xunyahay hadal shalay uu ka jeediyay magaalada Jowhar, oo ahaa inuu fashilmay imtixaanka maamulka Puntland.
Qoraalka waxa uu ku sheegay in la siiyay xog khaldan taasoo eheyd in madaxweynaha Puntland uu Garowe ka sheegay in la jabsaday imtixaanka Puntland, sidaasna uu u sheegay ardeydii Jowhar ee uu khudbada u jeedinayay, isagoo aan iska hubin hadalka.
dhinaca kale warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in hadalkan raalligelinta uu yimid daqiiqado kadib markii wadahadal dhinaca talefoonka ah uu dhexmaray Madaxweynaha Puntland iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, taasoo looga dalbaday in Goodax uu raalli gelin ka bixiyo hadalkii beer-abuurka ahaa ee ka soo yeeray.
Qarax khasaare geeystay oo ka dhacay Magaaladda Muqdisho